Izichumisi zemichiza ziveliswa ngokwenziwa kwizinto ezingaphiliyo, zizinto ezinikezela ngezinto ezinesondlo ekukhuleni kwezityalo ngeendlela zomzimba okanye zemichiza.
Izondlo zezichumisi zemichiza
Izichumisi zemichiza zityebile kwizondlo ezintathu eziyimfuneko ekukhuleni kwezityalo. Iindidi zesichumiso zikwiindidi ezinkulu. Eminye imizekelo yezichumisi zemichiza zii-ammonium sulphate, i-ammonium phosphate, i-ammonium nitrate, i-urea, i-ammonium chloride njl.
Yintoni izichumisi zeNPK?
☆ Isichumiso senitrogen
Iingcambu zezityalo zinokufunxa isichumiso se-nitrogen. Initrogen lelona candelo liphambili leeprotein (kubandakanya ezinye ii-enzymes kunye necoenzyme), i-nucleic acid kunye ne-phospholipids. Ziyinxalenye ebalulekileyo yeprotoplasm, i-nucleus kunye ne-biofilm, enendima ekhethekileyo kwimisebenzi ebalulekileyo yezityalo. Initrogen yinxalenye yeklorophyll, ke inolwalamano olusondeleyo nefotosinthesisi. Inani le nitrogen liya kuchaphazela ngokuthe ngqo ukwahlulwa kweseli kunye nokukhula. Ke ngoko, unikezelo lwesichumiso se-nitrogen luyafuneka kakhulu. I-Urea, i-ammonium nitrate kunye ne-ammonium sulfate zihlala zisetyenziswa kwezolimo.
☆ Isichumiso sePhosphatic
I-Phosphorus inokukhuthaza ukukhula kweengcambu, iintyatyambo, iimbewu kunye neziqhamo. I-Phosphorus ithatha inxaxheba kwiinkqubo ezahlukeneyo ze-metabolic. I-Phosphorus ityebile kwimeristems, enezona zinto zinemveliso ebomini. Ke ngoko, ukufaka isichumiso se-P kunefuthe elihle kwisikhulisi, isebe kunye nokukhula kweengcambu. I-Phosphorus ikhuthaza ukuguqulwa nokuhanjiswa kwee-carbohydrate, eyenza ukukhula kweembewu, iingcambu kunye nezilimo eziyizigaxa. Inokonyusa kakhulu isivuno sezityalo.
☆ isichumisi sePotassic
Isichumisi se Potassic sisetyenziswa ekukhawuleziseni ukukhula kwesiqu, ukuhamba kwamanzi kunye nokukhuthaza iintyatyambo kunye neziqhamo. I-Potassium (K) ikwimo ye-ion kwizityalo, egxila kwezona ndawo zinemveliso kubomi besityalo, ezinjengendawo yokukhula, i-cambium kunye namagqabi, njl njl. ukufunxwa kwamanzi.
Izibonelelo kwisichumiso semichiza
Izichumisi zemichiza ezinceda ukukhula kwezityalo
Ziqulathe enye okanye nangaphezulu yezakha mzimba ezibalulekileyo ezinje nge nitrogen, phosphorus, kunye ne potassium kunye nezinye ezahlukeneyo. Nje ukuba zongezwe emhlabeni, ezi zinongo zizalisekisa iimfuno ezifunwa zizityalo kwaye zibanike izakhamzimba ebebengenazo ngokwendalo okanye zibancede bagcine izondlo ezilahlekileyo. Izichumisi zemichiza zibonelela ngemixube ethile yeNPK ukunyanga imihlaba nezityalo ezingenazondlo.
Izichumisi zemichiza zitshiphu kunezichumiso eziphilayo
Izichumisi zemichiza zihlala zibiza ixabiso elingaphantsi kakhulu kwezichumiso eziphilayo. Kwelinye icala, ukubona kwinkqubo yemveliso yezichumisi. Akunzima ukufumanisa izizathu zokuba kutheni izichumiso zendalo zibiza kakhulu: isidingo sokuvuna izinto eziphilayo ukuze zisetyenziswe kwizichumiso, kunye neendleko eziphezulu zokuqinisekiswa kwezinto eziphilayo zizinto ezilawulwa ngurhulumente.
Kwelinye icala, izichumisi zemichiza ezijike zingabizi kakhulu kungenxa yokuba zipakisha izakhamzimba ezininzi ngeponti nganye yobunzima, ngelixa izichumisi ezingaphezulu eziphilayo ziyafuneka kwinqanaba elifanayo lezakha mzimba. Omnye ufuna iipawundi ezininzi zezichumiso eziphilayo ukubonelela ngamanqanaba afanayo omhlaba wokutya okunikwa sisikiti esinye sesichumiso semichiza. Ezo zizathu zibini zichaphazela ngokuthe ngqo ukusetyenziswa kwesichumisi semichiza kunye nesichumiso sendalo. Ezinye iingxelo zibonisa ukuba imakethi yesichumiso saseMelika mayibe zii-40 zeebhiliyoni zeedola apho izichumiso zihlala kwi-60 yezigidi zeedola. Into eseleyo sisabelo sezichumisi ezingezizo ezendalo.
Ukubonelela ngesondlo kwangoko
Ukubonelelwa kokondla kwangoko kunye neendleko zokuthenga ezisezantsi zidume kakhulu ngezichumisi ezingaphiliyo. Izichumisi zemichiza ziye zaba yinto ephambili kwiifama ezininzi, iiyadi kunye neegadi, kwaye zinokuba yinto ephambili kwinkqubo yokhathalelo lwengca esempilweni. Nangona kunjalo, ngaba isichumisi semichiza asonakalisi umhlaba nezityalo? Ngaba akukho zinto zifuna ukuqatshelwa ekusetyenzisweni kwezichumisi zamachiza? Impendulo ngokuqinisekileyo ayikho!
Iziphumo zokusiNgqongileyo zokuSebenzisa isichumisi esenziwe ngaxeshanye
Ungcoliseko kumthombo wamanzi angaphantsi komhlaba
Ezinye zeekhompawundi zokwenziwa ezisetyenziselwa ukwenza izichumisi zamachiza zinokuba neziphumo ezibi kokusingqongileyo xa zivunyelwe ukuba zibaleke ziye kwimithombo yamanzi. I-nitrogen engena emanzini aphezu komhlaba zii-51% zemisebenzi yabantu. I-Ammonia nitrogen kunye ne-nitrate zezona zinto zingcolisayo emilanjeni nasemachibini, ekhokelela ekusukeleni i-eutrophication kunye nongcoliseko lwamanzi omhlaba.
Ukutshabalalisa ubume bomhlaba
● Ngokusebenzisa ixesha elide kunye nokusetyenziswa kakhulu kwesichumisi semichiza, eminye imiba yokusingqongileyo iya kuvela, enje ngomhlaba omuncu kunye ne-crust. Ngenxa yokusebenzisa ubuninzi bezichumisi ze-nitrogen, endaweni yesichumiso sendalo, umhlaba othile weefama ezishushu ukwi-crust yomhlaba, ekhokelela ekuphulukaneni nexabiso lokulima. Iziphumo zezichumisi zamachiza emhlabeni zikhulu kwaye azinakulungiseka.
● Ukusetyenziswa kwesichumisi sexesha elide kungatshintsha i-pH yomhlaba, kuphazamise i-ecosystems, kwandise izinambuzane, kuze kube negalelo ekukhutshweni kweegesi zegreenhouse.
● Iindidi ezininzi zezichumisi ezingaphiliyo zine asidi eninzi, ethi yona isoloko inyusa ubumuncu bomhlaba, ngokwenza njalo kuncitshiswe izinto eziluncedo kwaye kuthintele ukukhula kwezityalo. Ngokucaphukisa le nkqubo yendalo, ukusetyenziswa kwexesha elide kwesichumisi kunokukhokelela kukungalingani kwemichiza kwizityalo ezamkelwayo.
● Ukuphinda isicelo kunokukhokelela ekwakhiweni kweekhemikhali ezinjenge-arsenic, i-cadmium, ne-uranium emhlabeni. Ezi khemikhali zinetyhefu ekugqibeleni zinokwenza indlela yazo iziqhamo kunye nemifuno.
Ukuba nolwazi olululo malunga nokusetyenziswa kwesichumisi kunokuthintela inkunkuma engeyomfuneko ekuthengweni kwezichumisi kunye nokunyusa isivuno sezityalo.
Ukukhetha isichumisi ngokweempawu zomhlaba
Ngaphambi kokuthenga isichumisi, kufuneka uyazi kakuhle i-pH yomhlaba. Ukuba umhlaba wour, sinokonyusa ukusetyenziswa kwesichumiso sendalo, sigcine ulawulo lwe nitrogenous kwaye sihlale sisixa sesichumiso se-phosphatic.
Ukusebenzisana kunye isichumiso sezinto eziphilayo
Kubaluleke kakhulu ukuba ukusetyenziswa kwezolimo isichumiso sezinto eziphilayo kunye nesichumiso semichiza. Izifundo zibonise ukuba kuyanceda ekufumaneni izinto eziphilayo. Ngokusetyenziswa kwesichumiso sendalo kunye nezichumisi zemichiza, izinto eziphilayo zomhlaba ziyahlaziywa kwaye amandla otshintshiselwano nge-cation yomhlaba ayaphuculwa, enceda ekuphuculeni umsebenzi we-enzyme yomhlaba kunye nokwandisa ukufunxeka kwezondlo zezityalo. Inceda ukuphucula umgangatho wezityalo, ukuphucula umxholo weprotheni, ii-amino acid kunye nezinye izondlo, kunye nokunciphisa umxholo we-nitrate kunye ne-nitrite kwimifuno nakwiziqhamo.
Ukukhetha indlela eyiyo yokuchumisa
Kwiindlela zokuchumisa kunye neemeko zokusingqongileyo, umxholo we-nitrate yemifuno kunye nezityalo kunye neentlobo ze-nitrogen emhlabeni zihambelana kakhulu. uxinzelelo oluphezulu lwe-nitrogen emhlabeni, umxholo we-nitrate ophezulu kwimifuno, ngakumbi kweli xesha lokugqibela. Ke ngoko, ukufaka isichumiso semichiza kufanele kube kwangoko kwaye kungabi kakhulu. Isichumisi esine-nitrogen asikulungelanga ukusasazeka, kungenjalo sikhokelela kugaleko okanye ilahleko. Ngenxa yokuhamba okuphantsi, isichumiso se-phosphatic kufuneka sibekwe nzulu.
Izichumisi zemichiza zithanda kakhulu ukukhula kwezityalo, ngelixa zinempembelelo enkulu kwindalo esingqongileyo.
Kukho umngcipheko wongcoliseko lwamanzi omhlaba kunye nemicimbi yokusingqongileyo ethi izise isichumiso semichiza. Qiniseka ukuba uyakuqonda okwenzekayo emhlabeni phantsi kweenyawo zakho, ukuze uzikhethele ngokwakho.
Umgaqo wokusebenzisa isichumisi samachiza
Nciphisa inani lesichumiso esenziwe ngemichiza kwaye udibanise nesichumiso esenziwe ngezinto eziphilayo. Yenza uxilongo lwesondlo ngokwemiqathango yomhlaba wakho kwaye ufake isichumisi ngokweemfuno ezizizo.